कुरा खेलौना - सबै भन्दा राम्रो उपहार एक बच्चा!
खिलौने कुरा - यो सबैलाई एक बच्चाको के सपना छ। केही साना furry सानो हरेक शब्द दोहरो जनावर, crumbs पूर्ण आनन्द यसलाई ल्याउन सक्षम हुनेछ uttered। यस्तो सपना लागू गर्न सजिलो छ!
कुरा खिलौने - आफ्नो बच्चा को एक साँचो मित्र
त्यसैले, अर्को छुट्टी आउँदै ... तपाईं आफ्नो बच्चा दिन के सोचिरहेका छन् ... भएको अन्तरक्रियात्मक कुरा खेलौना सही उपहार छ! यो साँचो मित्र आफ्नो बच्चाहरु गर्न।
प्रत्येक खेलौना बोल्ने, खैर, यसको आफ्नै वर्ण endowed छ। तिनीहरूले तिनीहरूलाई आफ्नो बच्चाहरु सिकाउँछ कुनै पनि वाक्यांश सम्झना गर्न सक्षम "आफ्नो भाषामा" छन् र यसरी भन्छन्।
तिनीहरूलाई केही पनि गाउन र नृत्य कसरी थाहा छ। त्यहाँ "खुवाउन" आवश्यक गर्नेहरूलाई छन्। र तिनीहरूले सोचो के को लागि कृतज्ञ urchat केही खिलौने, पेट, मिलाउ, अप फेंक, वा पुच्छर को बिस्तारै फरफर। छोटो, तपाईंको छोराछोरी यी साना मित्र तिनीहरूलाई धेरै मजा ल्याउनेछ।
को अन्तरक्रियात्मक खिलौने कसरी?
त्यसैले तपाईं आफ्नो बच्चा एक उपहार छानिएको छ। तपाईंले यो खरिद थाहा के गर्नुपर्छ? खेलौना कुरा ब्याट्री मा काम गर्छ। यो संग सुसज्जित, नियम को रूप मा, बाध्य रिबुट क्लिक गर्नुहोस्।
उहाँलाई अपील गर्नेछ भन्ने कुरा - आफ्नो बच्चा, खैर, तपाईं खेलौना कुनै पनि रंग चाहनुहुन्छ भने चयन गर्न सक्षम हुनेछ! को प्राप्त वर्ण आँखा ध्यान। धेरै खिलौने यो एलसीडी स्क्रीन जो भावना को एक ठूलो रकम व्यक्त। तदनुसार, तिनीहरूले गर्न सक्छन् र आश्चर्य र झट्ट र squinting।
खेलौना intonations को एक किसिम बोल्न सक्छन्, त्यो गुरगुर गर्नु वा हाँस्न, गाउन वा यो समय जब, थकान रिपोर्ट गर्न सक्षम छ ओछ्यानमा जान। मुख्य कुरा आफ्नो मित्र लामो समय छोड्ने छैन। अन्यथा यो दुःखी वा बिरामी बन्न सक्छ।
अन्तरक्रियात्मक खिलौने दुवै बच्चाहरु र वयस्क रोचक
आनन्द मात्र होइन बच्चाहरु मा आउन यस्तो उपहार तर पनि आमाबाबुको। उदाहरणका लागि, एक कुरा खेलौना povtoryushka एक लोखर्के लोकप्रिय मोडेल को एक भएको छ। खैरो वा रातो सानो स्तनधारी रेकर्ड बोली र यो पनि वयस्क मजा एक हास्यास्पद आवाज रूपमा reproduces।
सबैभन्दा एक कुरा खेलौना povtoryushka गाउँछन् रूपमा सुन्न रोचक गीत "सुन्न"। केहि भने, अझ भन्दा वयस्क यस्तो उपहार आनन्द र राम्रो हाँसो थियो।
बिरालोहरु, hamsters, भालू ...
कुरा अन्तरक्रियात्मक खेलौना - आफ्नो बच्चा अपिल सक्छ कि कुनै पनि चरित्र छ। अक्सर यी hamsters, छाप वा भालू समावेश गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, टम धेरै साझा मोडेल छ। यो छ - बाल्यकाल कार्टून देखि ज्ञात सबै को एक खेलौना बिरालो कुरा। कुनै पनि स्वरको आरोह अवरोह संग बोली वाक्यांश को एक विशाल विविधता सम्झिन र दोहोरिन सक्छ।
आइभेरी पूर्ण गर्दा आफ्नो हात हटाइएका छन् प्रत्येक शब्द, reproduces। यसको पन्जा उठाएको जब तपाईं आवश्यक वाक्यांश उच्चारण। यो बिन्दु र रेकर्डिङ सुरु मा। शब्द, बिरालो मात्र होइन आफ्नो बच्चा आनन्द धेरै ल्याउन, तर पनि सारा परिवारको लागि ठूलो आनन्द हुनेछ कुरा।
यो खेलौना बालिका र केटाहरू दुवै गर्न अपील गर्नेछ। त्यहाँ एक उपहार पनि महंगा, एउटा अलि बढी 1,000 भन्दा rubles, र एक राम्रो मूड मा तपाईं निश्चित प्रदान गरिएको छ यस्तो छ!
मनपर्ने कार्टून वर्ण
अक्सर, बच्चाहरु सबै भन्दा लोकप्रिय र बोल्ने रूपमा प्रस्तुत छ "साथीहरू।" उदाहरणका लागि, आधुनिक कार्टून "Masha र भालु" को मुख्य पात्र धेरै बालिका प्रसन्न हुनेछ! खराब बच्चा त प्रसिद्ध एनिमेटेड श्रृंखला सबै धन्यवाद हामीलाई परिचित छ जो आफ्नो वाक्यांश आवाज, बारम्बार हुनेछ। एक पुतली 1200 rubles र माथि लागि हुन सक्छ किन्न।
केटाहरु परित्याग र तिनीहरूले के चाहनुहुन्छ भन्न गर्ने आकार देखि थिएन। वास्तवमा, धेरै खिलौने uttered वाक्यांश दोहोरिन मात्र होइन, तर पनि बच्चाहरु पहेली सोच्न गीतहरू गाउन वा कविता भन्नु सक्षम छन्। यसबाहेक, तिनीहरूलाई केही पनि नृत्य गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो मोडेल को मूल्य 2000 rubles भन्दा उच्च हुनेछ।
छोराछोरी पनि Cheburashka, विनी को Pooh, Pinocchio, आदि जस्ता नायक कदर मुख्य कुरा आफ्नो बच्चाहरु जस्तै छ जो आदेश, निर्धारण गर्न छ। यसको स्वाद द्वारा खिलौने टिप्न, आफ्नो आकार, समारोह र लागत खोज्न। छनौट गर्न नहिचकिचाउनुहोस् मिति गाह्रो छैन।
किन्न कुरा खिलौने बच्चाहरु को लागि सामान संग कुनै पनि पसलमा हुन सक्छ। तिनीहरूले बिना कुनै पनि गम्भीर संस्थाले गर्न बस असम्भव छ, यति लोकप्रिय बनेका छन्। आफ्ना छोराछोरीको स्टोर प्रत्येक तपाईंको बिट मात्र होइन र टुक्रा, र आफ्नो सानो साथी, तर पनि तपाईंलाई रमाइलो गर्न निश्चित हो कि यस्तै खिलौने को एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ।
त्यसैले, आफ्नो बच्चा गर्न यस्तो उपहार खरीद, तपाईं उहाँलाई धेरै मजा, ठूलो मुड, उज्ज्वल र हँसिलो मिनेट को धेरै प्रदान दिनुहोस्। यो खेलौना सबै आशा पूरा हुनेछ भनेर शङ्का छैन। तर, पहिलो स्थान छैन तपाइँको, र आफ्नो प्रिय बच्चा छ! मनपर्ने कार्टून वा परी कथा वर्ण, सबै शब्द र वाक्यांश लागि crumbs प्रतिध्वनियन - यो एक निरन्तर सकारात्मक छ, मुस्कान र हाँस्न!
बेबी मात्रा Laica: विवरण र फोटो
एक वर्ष बारेमा जान्नु आवश्यक छ बच्चाहरु को विकास को चरणमा के हुन्?
NAS lactose निःशुल्क: संरचना, समीक्षा
नाम रूसी लोक खेल र amusements। रूसी लोक खेल: नाम र नियमहरू
मानसिक रोगहरू। द्विध्रुवीय प्रभावकारी विकार
उल्टी, पखाला, र वयस्क मा तापमान: कारण र उपचार
Khachapuri। हरेक दिन को लागि व्यञ्जनहरु।
Platon Lebedev जीवनी entrepreneurial detelnost
इङ्गल्याण्ड राजा एडवर्ड VII: जीवनी, सरकार, राजनीति
प्रसिद्ध वर्ण र तिनीहरूलाई प्ले गर्ने अभिनेता। "Oz महान् र शक्तिशाली" - पुरानो कथा एक नयाँ तरिका मा भन्नुभयो
गल्फ Depandance4* (चेक गणतन्त्र, प्राग): होटल, सेवा, समीक्षा को विवरण
"Enterozhermina" छोराछोरीलाई लागि: सिफारिसहरू र समीक्षा आवेदन मा एक निर्देशन
फुटबल खेलाडी Belkevich वैलेन्टिन: जीवनी, उपलब्धि, मृत्यु को कारण